Sales Kurovedzwa Camp
Kunyangwe iwo maProsesa Anodzokera Kurovedza Kamba
China, June 24, 2010 China, Gumiguru 4, 2012 Matt Nettleton
Nei uchiita Colts kuenda kuTraining Camp? Havatomboziva kutamba bhora here?
Musi waChikunguru 30 wegore rino maColts achaenda kuTraining Camp, izvi zvicharatidza kutanga kwevhiki ina yekudzidzira kwakanyanya kwakagadzirirwa kumanikidza vatambi kuti vatarise pane zvavanofanira kuita kusimudzira kugona kwavo kutamba nhabvu. Asi zvinoita sekutambisa nguva kwandiri, mushure mekuti vese vatambi ava vapedza kanenge makore masere apfuura ehupenyu hwavo vachishanda hunyanzvi hwavo mumitambo inokwikwidza uye maColts akahwina kupfuura chero rimwe timu rehunyanzvi panguva ino. Chii paPasi pano chaigona kufunga kuti vanhu ava vachadzidza?
Hazvishamise kuti pazuva rekutanga remusasa ivo vangangonzwa iyo yakakurumbira Vince Lombardi quote kuti vangangoita varairidzi vese kutanga kudzidzisa musasa. "Varume, iyi nhabvu." Uku kutanga kunongedzera kune vese vatambi vari munhandare kuti budiriro munhabvu, zvakanyanya sekubudirira mukutengesa, zvese zvine chekuita nezve kukwana uye kufunga kwakatarisana kwekuita zvinhu zvidiki nemazvo uye uine chokwadi chekuti iwe uri kuita izvo zvakakosha.
Sezvo isu tichishanda nevatengi vedu hapana chimwe chinogutsa sekutarisa maziso avo achivhenekera sezvavanoona kuti kudzidziswa mukutengesa hakuna kusiyana nekudzidzira zvemitambo. Vanoona kuti hurongwa hwavakatanga kudzidza hausisiri chimwe chinhu kunze kwekungotevedzana kweZvibata, Maitiro nemaTekiniki- kuti kana vakaurayiwa nemazvo zvinowedzera mikana yavo yekuvhara bhizinesi rakawanda nekuita mari yakawanda.
Uye ivo zvakare vanoziva nei kurovedza kuita kuri kuenderera mberi, nemutengi wedu anoshanda pamwe nesu kwemakore 4-6. Nekuti kunyangwe zviite nyore sei Maitiro, Maitiro uye Matekiniki pane mugwagwa murefu kubva pakusaziva zvaunofanira kuita kuti uite zvaunofanirwa kungoerekana waitika.
Ini handitendi kuti kuita kunoitisa kukwana, muchokwadi munhabvu uye mukutengesa hapana chakakwana. Nekudaro, munharaunda yega yega yehunyanzvi isu tinoziva kuti tsika inofambira mberi. Paunotarisa pane rako rekutengesa, vari kuzviita here? Uye nekudzidzira ini ndinoreva, vari kunyatso shandira kurongeka kuvandudza kugona kwavo kutengesa vachishandisa inoenderera yekusimbisa pamwe nekudzokorora uye kuyerwa kwemhedzisiro? Kana ivo vari kunze kuona vanhu vazhinji sezvavanogona, vachitarisira kuti zvavari kuita ndizvo chaizvo?
Inotevera nguva iwe paunotarisa Peyton Manning achikanda inoita kunge yakapusa ina yadhi yekubata pasi ive nechokwadi chekuti unomira woziva kuti paminiti yega Peyton inotamba panhandare panguva yemitambo iye anoshandisa anopfuura maminetsi gumi neshanu mundima achidzidzira. Izvo zvinondidzosera kumashure kumubvunzo wangu, kana iwe ukatarisa kune rako rekutengesa simba, vari kuzviita?
ATTN: Yemagariro Media Chikumbiro Vagadziri